အသည်းအစားထိုးကုသမှုခံယူပြီးနောက် ကလေး၏ဘဝ - Hello Sayarwon
မိဘအတော်များများဟာ ကလေးငယ်တွေ အစားထိုးကုသမှုအပြီးမှာ အပြင်ကိုခေါ်သွားရာမှာ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကလေးငယ်ဟာ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာကို အစားထိုးကုသမှုကနေ ပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့ ကျော်ဖြတ်ရတာမို့ သူ့ရဲ့ ပုံမှန်ဘဝကို ပြန်လည် အစပြုဖို့ဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ခရီးထွက်ခြင်းဟာ သင့်ကလေးငယ်ကို ပုံမှန်ပြန်လည် ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
လူများတဲ့ ပိတ်လှောင်နေတဲ့ နေရာတွေကို ပထမရက်သတ္တပတ် (သို့) လအတွင်း ရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ကော်ဖီဆိုင်၊ စူပါမားကပ်၊ ဘက်စ်ကား စီးခြင်း။ ကလေးငယ်တွေ အများအပြားရှိတဲ့ အုပ်စုတွေကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ် (ဥပမာ ကလေးမွေးနေ့)
ဆွေမျိုးတွေ သူငယ်ချင်းတွေကို အုပ်စုလူအနည်းစီနဲ့ အိမ်ကို လာလည်ဖို့ အားပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပြန်ကောင်းမှု ဖြစ်စဉ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဖျားနေရင် ကလေးအနားကို မကပ်စေသင့်ပါဘူး။ ဒါဟာ စိတ်ဆိုးစရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သင့်ကလေးငယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ နားလည်နိုင်မှာပါ။
အစားထိုးကုသပြီး ၃ လအကြာမှာ သင့်ကလေးဟာ ပုံမှန်အတိုင်း ကျောင်းပြန်တက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပြီး စစချင်းမှာ အချိန်ပိုင်းသာ တက်သင့်ကာ နောက်မှ တဖြည်းဖြည်း အချိန်ပြည့် တက်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဆေးခန်းမှာ သင်နဲ့ ဆွေးနွေးသင့်တဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေဟာ ကလေးတွေကျောင်းပြန်တက်ရင် ရောဂါပိုးဝင်မှာကို စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ကလေးဟာ အစားထိုးကုသမှု လုပ်ထားကြောင်းကို ကျောင်းက သိဖို့လိုအပ်ပြီး ဒါမှသာ အတန်းဖေါ်တစ်ယောက်ယောက်က ကူးစက်ရောဂါ တစ်ခုခု ဥပမာ ရေကျောက် ဖြစ်ရင် သင့်ကို စောစီးစွာ သိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူကြိုကလေးငယ်တွေဟာ အစားထိုးကုသမှုအပြီး ၆-၁၂ လအကြာမှာ မူကြိုသွားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ဆေးခန်းမှာ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် မိဘတွေဟာ ကလေးငယ် မူကြိုစတင်တက်ချိန်မှာ အခြားကလေးငယ်တွေကနေ ရောဂါပိုးကူးစက်မှာကို စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သင့်ကလေးငယ်ကို သူ့အရွယ် အခြားကလေးငယ်တွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးခွင့် ပေးသင့်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ ဖေါ်ပြထားသလိုပဲ ကလေးငယ် အစားထိုးခွဲစိတ်မှုလုပ်ထားခြင်းကို မူကြိုကို အသိပေးထားသင့်ပြီး အခြားကလေးငယ် ကူးစက်ရောဂါပိုး တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် သင့်ကို အကြောင်းကြားစေဖို့ ပြောထားသင့်ပါတယ်။ ရေကျောက်ဟာ မူကြိုအရွယ်ကလေးငယ်တွေမှာ အဖြစ်များတာမို့ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။
အသည်းအစားထိုးခြင်းအတွက် ပေးထားတဲ့ဆေးတွေဟာ သွေးပေါင်တက်ခြင်းနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းဟာ သွေးပေါင်ထိန်းပေးပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်နှုန်းကို ရေရှည်မှာ ကျဆင်းစေတာကြောင့် ကျန်းမာစေဖို့ လူတိုင်းလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီပြဿနာတွေ ဖြစ်နှုန်းဟာ ကလေးငယ်စဉ်မှာ မြင့်မားမှု မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကလေးငယ်ဟာ ဆေးတွေကို တစ်သက်လုံးသောက်ရမှာမို့ ကျန်းမာအောင် နေထိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်တဲ့ အခြားအကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ အစားထိုးကုသမှုကြောင့်နဲ့ အစားမထိုးခင်မှာ ဝမ်းဗိုက်ဟာ ပြည့်ကားနေတာမို့ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေကို သန်စွမ်းစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်ပါတယ်။
သင့်ကလေးငယ်ရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ဟာ အစားထိုးမှု လုပ်အပြီးမှာ ပူနေတာကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အချို့မိဘတွေဟာ အသည်း၊ သရက်ရွယ်ကြီးခြင်း (သို့) ဗိုက်အတွင်းမှာ အရည်စုခြင်းတွေကို စိတ်ပူတတ်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဒါဟာ ကြွက်သားသန်မာမှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်တာမို့ စိတ်ပူဖို့မလိုပါဘူး။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် ပြန်ကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
Pediatric liver disease: Life after transplant. https://www.starship.org.nz/media/181948/parentsguidebookfinal_suitable_for_email.pdf. Accessed 15/08/2015.
Morning sickness မဟုတ်ဘဲ မနက်ပိုင်း အန်ချင်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ ........